नर्वेको लङ्गेरवियन सहर जहाँ मर्न पनि प्रतिबन्ध छ ! « News24 : Premium News Channel
नर्वेको लङ्गेरवियन सहर जहाँ मर्न पनि प्रतिबन्ध छ !
मृत्यु शाश्वत सत्य हो । तर, कहिले, कहाँ र कसरीे हुन्छ भन्न सकिन्न । भन्न त जहाँ लेखिएको छ, त्यहीँ मृत्यु हुन्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालीका एउटा चर्चित गीत पनि छ– ‘मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन’ । तर, विश्वमा एउटा त्यस्तो सहर छ, जहाँ मर्न निषेध छ ।
नर्वेको लङ्गेरवियन सहर, जहाँ मर्न प्रतिवन्ध छ । दुईहजार मात्रै जनसंख्या रहेको यो सहरमा वर्षको चार महिना घाम लाग्दैन र २४ सैं घण्टा अन्धकार हुन्छ । पाँच महिना सूर्य अस्ताउँदैन । यहाँको अर्को विशेषता हो– कसैलाई मर्न इजाजत छैन । यो सहरमा धरै नै सानो एउटा चिहान छ । जहाँ २७ वर्षदेखि कसैलाई पनि गाडिएको छैन ।
खासमा अत्यधिक चिसोका कारण यहाँ लास कुहिदैन । धेरै वर्ष पहिले वैज्ञानिकले यहाँको लासबाट केही भाग निकालेर परीक्षण गरेका थिए । जाँच गर्दा त्यसमा मरेको धेरैपछि पनि इन्फुल्जाको भाइरस भेटिएको थियो । यसपछि यहाँ ‘नो डेथ पोलिसी’ लागू गरिएको हो ।
त्यसैले यदि यहाँ कोही गम्भीर बिरामी भएमा या अन्तिम अवस्थामा पुगेमा हवाईजहाज अथवा पानी जहाजमा राखेर नर्वेको अन्य ठाउँमा पठाउने गरिन्छ ।